Inuu sheegay Malaa’ik badbaadisay, waxa uu ugu fadhiyay No. 52, inuu xabsi galay iyo dhacdooyin aan maanka galeynin oo laga diiwaan geliyay Nicklas Bendtner! Qaybta 2-aad. | Horumar Online
Nicklas Bendtner waxa uu ku dhashay isla markaasna uu kusoo barbaarray caasimadda Denmark ee Copenhagen.
Bendtner waxa uu carruurnimadiisa ciyaarista kubadda cagta uu kasoo billaabay Tarnby Boldklub, ka hor inta uusan ka mid noqonin Kjobenhavns 1998.
Sanaddii 2004 ayuu u saxiixay kooxda kooxda Arsenal isagoo 16 jir ah, waxaa xilligaas loo arkayay xiddig mustaqbal leh isagoo weerarka kula lammaaneysnaa Arturo Lupoli oo ay dhallinyarada Gunners ka wada tirsanaayeen.
Isagoo jira da’da 18 sano ayaa loo magacaabay xiddigaha qaranka Denmark ee ka qayb galay European Under-21 Championships ee sanaddii 2006.
Xilligaas ayuu billaabay dhibka joogtada ah ee uu naftiisa iyo waxa ku hareersan uu geysanayo.
Waxa uu inta badan caado u lahaa inuu la dagaallo xiddigaha ka waaweyn ee ay qolka lebiska wadaagaan.
Ciyaar ay Denmark ka hortageen qaranka Netherlands ayaa lagu beddelay Morten ‘Duncan’ Rasmussen, aad ayuunna uga xumaaday.
Ka dib shir jaraa’id ayuu ku sheegay in gebi ahaan qalad uu ahaa beddelka lagu sameeyay, waxaana uu tilmaamay inuu isaga ahaa mid ka fiican xiddigga lagu beddelay, iyadoo ugu dambeyn lagu amray inuu raalli gelin ka bixiyo.
Sanaddii 2008, waxa uu marna qayb ka noqonayay kooxda koowaad ee Arsenal, marna waa uu weynayay, halka dhibaato ee uu qabayna waxa ay ahayd Emanuel Adebayor.
Adebayor ayaa horraan hoosta ka xarriiqay in isaga iyo Bendtner aysan lahayn xiriir wanaagsan, dagaalkooduna uu yimid markii laacibka reer Denmark uu diiday inuu kabaha siibo inta uusan soo gelin qolka lebiska.
Ciyaar u dhexeysay Arsenal iyo Tottenham isla markaasna ahayd marxaladda afar-dhamaaadka tarta League Cup ayaa waxa uu farta dhexe u taagay Adebayor, waxaana taasi ay dhalisay in labada xiddig muran ay garoonka kaga baxaan.
Adebayor oo arrintaas ka fal-celinayana waxa uu yiri: “Nicklas Farta ayuu ii taagay, waana ka xumahay, Farta uma taagi kartid qof aad isku koox tihiin”.
Sanaddii 2009, waa uu 21-jirsaday, waxaana la filayay inuu caqli ahaan koray oo uu is beddeli doono.
Hase ahaatee, ma aysan dhicin taas, inuu kasii daro ma ahanee.
Bishii May ee sanadkaas waxaa sawirro laga soo qaaday isagoo surwaalkii ka dhacay oo ay caqnowyadiisu celinayaan, waxaana uu ku sugnaa Club-ka Boujis nightclub oo ku yaallo Londo, saacadduna waxa ay ahayd 4am.
Hase ahaatee ficilkaas raalli gelin ayuu ka bixiyay laacibkan, waxaana uu tilmaamay inuu yaryahay, balse ficilladiisa ay yihiin kuwo qaldan, hoosna u dhigaya Club-ka iyo naftiisa, isagoo raaciyay inuu aad kaga shallaayay.
Markii Augsut la gaarray xilli ciyaareedkii cusbaa, waxaa laacibkan uu helay fursado cusub si uu bilaw nadiif ah u helo.
Waxa ay u ahayd xilli u qaas ah, maadaama lamabrkii maaliyadda ee 26-aad laga beddelay waxaana loo xiray lambarka 52, mushaarkiisana waxaa laga dhigay £52,000.
Waxa uu caddeeyay in lambarka uu isaga ka helo uu yahay Lambar 7, waxaase xilligaas xirnaa Thomas Rosciky, sidaas darteed ayuu usoo dhoweeyay 52 maadaama ay ka dhignay 5+2 oo la mid noqoneysa 7.
Waxa uu lacago u celiyay dhammaan taageerayaashii iibsaday maaliyaddiisa lmabarka 26 ku asteysnaa, waxaana kaga baxday lacag dhan £10,000.